I-Lorcaserin (Belviq) umgubo (616202-92-7) hplc≥98% | Ukuphulukana namafutha kwi-AASraw
/ iimveliso / I-Fat Loss powder / Lorcaserin (Belviq) powder
Akukho kalo SKU: 616202-92-7. Udidi: I-Fat Loss powder
Ukuvelisa ukulahleka komzimba ngokukhuselekileyo nokukhuselekileyo ngumsebenzi onzima. Imizamo yexesha elidlulileyo ifike ngeempembelelo ezininzi ezifana nomonakalo wentliziyo. Ngenhlanhla, uphando olutsha luthi i-lorcaserin ipilisi yokulahlekelwa isisindo inokukunceda ukuba uchithe ubunzima obunzima ngaphandle kokubingelela impilo yentliziyo yakho. I-Lorcaserin iyimfuneko yepilisi yokunciphisa ukutya, evunyiwe yi-FDA kwi-2012. Kodwa yintoni i-lorcaserin? Ewe, ngezantsi kunenkcazo ecacileyo yeziyobisi, isakhelo samakhemikhali kunye neepropati, ukusetyenziswa, ukulinganisa, ukuthintela, kunye nokunye okuninzi.
Lorcaserin (Belviq) ividiyo powder
ILorcaserin (Belviq) ipowder Abalinganiswa basisiseko:
igama: I-Lorcaserin (i-Belviq) ipowder
Ngaphantsi kwe-chemical structure of lorcaserin kwi-3-D.
Iimveliso zeMichiza zeLarkcaserin (belviq) (i-CAS 616202-92-7)
Ngaphantsi kweempawu zeekhemikhali ezifingqiweyo zeLorcaserin (belviq); ziye zaboniswa kwitheyibhile engezantsi ukujonga ngokukhawuleza.
IMisa eyiyo 195.081 g / mol
IMasaisotopic Mass 195.081 g / mol
Indawo ye-Topological Polar Area 12 A ^ 2
Isibalo seBond yokuguquguquka 0
Isisindo somzimba 195.69 g / mol
Amaxesha onke okuhlukana
Inkcazo elula ye-Lorcaserin HCL powder
I-Lorcaserin (i-Belviq) yipilisi ekhuselayo yenkanuko eyenziwe yi-Arena Pharmaceuticals. Ikwaseklasini yezidakamizwa ezithiwa njenge-serotonin receptor agonists. Yenzelwe ukukunceda uzive ugcwele emva kokutya ukutya okuncinane. Iyakuthintela ukutya ngokuqalisa i-5-HT2C i-receptors, eziyiindidi ze-serotonin receptors kwingingqi yengqondo (hypothalamus) elawula ukutya. Xa babonisa umzimba wakho ukuba uzive ugcwele, ufumana ukutya okuncinci, ngoko uphelisa ukulahlekelwa ngumzimba ngexesha elide.
I-Belviq, egama layo likhemikhali (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3- benzazepine i-hydrochloride hemihydrate, ithetha ukuba ithathwe ngomlomo. Isisindo sayo se-molecular weight is 241.16 g / mol, kunye nesimo sayo esisigxina nguC11H15Cl2N • 0.5H2O. Inkomfa yayo yokwakha ingezantsi:
I-solcasility yeLorcaserin hydrochloride hemihydrate emanzini iphezulu kune-400 mg / mL. Amacwecwe Belviq has 10.4 neemiligram crystalline lorcaserin hydrochloride hemihydrate (a emhlophe off-powder emhlophe), nto leyo ilingana 10.0 milligrams anhydrous lorcaserin hydrochloride. Kwakhona iqulethe ezinye izinto, kuquka nemagnesium stearate NF, talc USP, lizuze & C Blue #2 aluminiyam edikeni, titanium dioxide USP, polyethylene ethers NF, Polyvinyl utywala USP, colloidal lesilicon dioxide NF, isodiyam croscarmellose NF, neselulosi microcrystalline silicified kunye hydroxypropyl neselulosi NF.
Isenzo sendlela yeLorcaserin
Ngokwe-criteria ye-Food & Drug Administration (2007), i-Lorcaserin inako ukunceda abantu abadala ukuba bafezekise ukulahlekelwa kwesisindo sokwenyuka kwezilwanyana. Isisifo sokulahlekelwa kwesisindo sitsho sisebenze kakuhle xa sibambene nomsebenzi wokwenyuka okwenyukayo kunye nokutya okuphantsi kweekhalori. Inokukunceda kakhulu ekulawuleni okungapheliyo, ngokukodwa kubantu abakhulu kakhulu (ubuncinane be-27 kg / m2), okanye ukhuluphele (i-BMI ubuncinane30 kg / m2). La mayeza anokunceda nabo abanomdla omnye okanye ubuninzi obunzima, njengoluhlobo lwe-2 sikashukela, i-dyslipidemia, okanye i-hypertension.
I-Lorcaserin yipilisi yokunciphisa inqweno enomdla eyenza ngokukhetha njenge-5-HT2C i-receptor agonist kwi-hypothalamus kunye nokukhethwa kwamanyathelo amaxesha alishumi elinesihlanu ngokubambisana kwe-5-HT2C i-receptors kune-5-HT2A kunye nokunyusa amaxesha e-100 ephakamileyo okukhethiweyo ukusebenza kwe-5-HT2C i-receptors kune-5-HT2B.
5-HT2C receptors ezise- phantse kuphela ubuchopho bomntu kwaye zifumaneka thalamus, ngxenye, uthinte, Hippocampus, plexus choroid, kwiCerebellum, kunye Amygdala. Ukukhuthazwa kwama-receptors ye-5-HT2C kwi-hypothalamus isebenza nge-POMC (proopiomelanocortin) ukuvelisa kwaye ngoko-ke kukhuthaza ukunciphisa umzimba ngokunyusa. Le ngxabano ixhaswa zilingo ezibonakalisiweyo kunye nezinye iziphumo zophando. Nangona ngokuqhelekileyo kucinga ukuba i-5-HT2C i-receptors incedisa ekulawuleni ukutya, ukugcinwa kwe-endocrine, kunye nomoya, indlela echanekileyo yokuthatha isenzo somyalelo wesondlo ayikwazi.
Ummkeli EC50 [nM] Ki[nM]
Ukusetyenziswa kwe-Lorcaserin HCL powder
Ukuba sibheka ukuhlolwa kwangempela kweLorcaserin ngaphandle, oko oku mhlawumbi iipilisi zokulahlekelwa kwesisindo esihle kakhulu kwimarike namhlanje. Abantu abathile abangaphezu kwamandla amaninzi, oko kukuthi, abo baneempawu zonyango ezinxulumene nesisindo okanye abo abagqithiseleyo banokuzuza kakhulu kule mveliso.
Xa ezisetyenziswa kunye nenkqubo nogqirha-evunyiweyo ukuzilolonga, hlelo yokudla ephantsi-osidingayo, kwaye ukutshintsha yokuphila, Lorcaserin anokunceda ubani wenze okuninzi kunokwahlukana nje ubunzima - oko kunceda ukwehlisa iingozi zempilo ezininzi zinxulunyaniswa ukutyeba, kubandakanywa uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo sikashukela, isifo senhliziyo, nokufa kwangaphambili.
Ngokutsho kweZiko loLawulo lweZifo, ukulahlekelwa yi-5 kuphela kwi-10 ipesenti yesisindo somzimba wonke singabonisa iintlawulo zezempilo ezifana nokuphucula kwiishukela zegazi, i-cholesterol yegazi kunye noxinzelelo lwegazi.
Umyinge we-Lorcaserin HCL powder
Abantu abadala kufuneka bathathe iipilisi ezimbini ngosuku. Ngoko ke kufuneka uzithathe iipilisi ze-60 ngenyanga. Ngokutsho kwe-FDA, umntu kufuneka asebenzise le nkunkuma ngexesha lobomi bakhe bonke ukugcina ubunzima obunempilo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuba iziphumo ezilungileyo zimele zibonwe emva kweeveki ze-12. Ukuba awuyi kulahleka ubuncinci ipesenti ze-5 zesisindo somzimba wakho wokuqala, ucebise ukuba uyeke ukusebenzisa ipilisi. Ngaphandle kokusetyenziswa okuqhubekayo, akunakwenzeka ukuba uya kufezekisa kwaye ugcine ukulahlekelwa kwesisindo sezempilo.
I-Lorcaserin HCL Iinkcukacha
Kuhle ukuba ukhumbule ukuba uqeqesho lwenkonzo yakho yezempilo luye lwayalela le nkunkuma kuba baye bafumanisa ukuba inzuzo oyifumeneyo iphezulu kunobungozi bemiphumo emibi. Uninzi lwabantu abathatha le michiza ababonisi iziphumo ezibi kakhulu.
Ngaphambi kokuba uthathe i-lorcaserin, vumela utyhemistri okanye ugqirha wakho ukuba wazi ukuba unesiqhelo kwiyeza; okanye ingaba unayo nayiphi na into ehambayo. I-Lorcaserin iqulethe izithako ezingasebenziyo ezingakhokelela ekuphenduleni okanye ezinye izinto. Buza i-pharmist yakho ukuba akunike iinkcukacha ezingaphezulu.
Phambi kokuba uthathe eli chiza, azise uSomayeza wakho okanye ugqirha malunga ngembali yakho yezonyango, ingakumbi iingxaki zezintso, isifo seswekile, ingxaki isibindi, izifo intliziyo (kubandakanywa block intliziyo, isifo wevalufa intliziyo, nentliziyo kade, ukusilela intliziyo) iingxaki kunokwandisa umngcipheko izilonda ezibuhlungu / ezide ngexesha lamadoda (kubandakanya i-penis ephosakeleyo, isifo se-Peyronie, i-myeloma eninzi, i-sickle cell anemia, i-leukemia).
Le pilisi yokunciphisa ukutya inokukwenza unciphise ukucinga okanye ukuhlaziya. I-marijuana okanye utswala ngotywala kungenza iziphumo zibi nakakhulu. Ungasebenzisi umatshini, ukuqhuba, okanye wenze nantoni na efuna ukuba uqaphele uze ukwazi ukwenza ngokucophelela. Nciphisa utywala kwaye uthethe ugqirha ukuba usebenzisa i-marijuana.
Ukuba ufanele uqhutywe kwinkqubo yokuqapha, kukuqiqa ukuba utshele wakho wamazinyo okanye ugqirha malunga nayo yonke imveliso oyithathayo (kuquka izidakamizwa ezingekho phantsi kweemviwo, iimveliso zamachiza, kunye neziyobisi zemithi).
Ukuba uhlala nesifo sikashukela, le pilisi yokulahlekelwa kwesisindo inokuchaphazela ushukela wegazi. Qinisekisa ukuba uhlolisisa izinga lakho leshukela legazi ngokukhawuleza njengoko ucebise kwaye wabelane ngeziphumo zakho kunye nogqirha. Yenza ugqirha wakho azi ukuba unempawu eziphantsi kwezeshukela zegazi. Unonophelo lwenkonzo yakho yezempilo ingadinga ukulungisa inkqubo yakho yokutya, ukutya okanye isifo sikashukela.
Esi sigqirha akufanele sithathwe ngexesha lokukhulelwa kuba singalimaza umntwana ongakazalwa. Buza ugqirha wakho malunga nokusetyenziswa kweendlela ezinokuthenjwa zolawulo lokuzalwa. Ukuba ukhulelwe okanye ukhulelwe, xelela uncedo lwenkonzo yakho yonyango ngokukhawuleza.
Okwangoku, awaziwa ukuba le nkunkuma idlula ubisi lwebele. Ukuthintela ubungakanani bengozi kusana, ukuncelisa xa kusetyenziswa le mayeza ayikhuthazwa. Qinisekisa ukuba udibana nodokotela wakho ngaphambi kokuba uncelise.
Funda iLeaflet yoLwazi lomsebenzisi ngokucophelela ukuba ikhona kumgqirha wakho ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa i-lorcaserin nanoma naluphi na ufumana ukuzaliswa. Ukuba unemibuzo, cela umkhompiki okanye ugqirha wakho.
Thatha le pilisi yokunciphisa intliziyo ngomlomo kunye okanye ngaphandle kokutya njengoko ulawulwa ngumkhemisi wakho, ngokuphindaphindiweyo kabini ngosuku. Sebenzisa le mveliso rhoqo ukuze ufumane uninzi kuwo. Ukukunceda ukhumbule, thatha i pilisi ngamaxesha afanayo imihla ngemihla.
I-Lorcaserin yisisikir Musa ukwandisa umthamo okanye uthathe le pilisi ngokuphindaphindiweyo kunokuba umiselwe. Imeko onayo ayinakuphucula nayiphi na into esheshayo, kwaye umngcipheko weemiphumo zengcinezelo inokunyuka.
Ukusebenzisana kwezidakamizwa ezinokuthi kunokwenzeka xa kwenzeka izidakamizwa ezithile kunye ne-lorcaserin ipilisi. Tshela ugqirha wakho malunga nazo zonke iziyobisi ozisebenzisayo okwangoku, kwaye nawuphi na umyalelo oqalayo okanye uyeka ukuyisebenzisa.
I-pilcaserin ipilisi yokulahlekelwa kwesisindo ayivunyelwe ukusetyenziswa ngabantu abangaphantsi kweminyaka eyi-18 ubudala.
Ndingayithatha njani i-Lorcaserin HCL powder?
Musa ukuhlafuna, ukuphula, okanye ukuchoboza ipilisi yokukhululwa. Zigxume nje.
I-Lorcaserin isondlo esinxilisayo yincinci yenkqubo epheleleyo yonyango enokuthi ibandakanye ukuzivocavoca, ukulawula ubunzima, ukutya, kwaye uhlale uvavanya ushukela wegazi. Landela amayeza akho, ukutya okunomsoco, kunye nemizila yokufunda ngokucokisekileyo.
Gcina amayeza kwiqondo lokushisa lokushisa ngaphandle kwentsholongwane kunye nomswakama.
Gcina irekhodi lemali yezilwanyana ezisetyenziswa kuzo zonke iibhotile. I-pilcaserin ipilisi yokulahleka kwesisindo yisisetyenziswa sokusetyenziswa kakubi, kwaye kufuneka uhlale uqaphela ukuba umntu usebenzisa iyeza lakho ngaphandle kwemithi okanye engafanelekanga.
Ungalokothi wabelane ngamachiza e-lorcaserin nabani na omnye. Gcina isilwanyana kwindawo apho kungekho mntu angayifumana khona.
Yintoni eyenzekayo xa uphoswa iDogcaserin dose?
Zithatha nje umthamo olahlekileyo ngokukhawuleza ukhumbule. Ufanele uwebe idosi ephosakeleyo ukuba ixesha le-dose elilandelelweyo elilandelayo liphantse. Musa ukuthatha i dose eyongezelelweyo ukwenza i dose ephosakeleyo.
Yintoni eyenzekayo xa unqumla iLorcaserin?
Khangela uncedo lwezonyango olungxamisekileyo okanye qha ga mshelana nomnxeba woNcedo lweTyhefu kwi-1-800-222-1222.
Yintoni ekumele ndiyiphephe ukuyithatha ngexesha lorcaserin?
Musa ukuthatha nayiphi na i-over-counter-counter okanye i-prescription weight-loss products ngaphandle kokucebisa ugqirha wakho. Kwakhona, musa ukuthatha imishanguzo ebanda okanye ukukhwehlela xa uthatha i-lorcaserin ipilisi.
Ziziphi ezinye amayeza anokuchaphazela i-lorcaserin?
La machiza alandelayo anokuchaphazela indlela i-lorcaserin isebenza ngayo:
A "triptan" apho amayeza-ezifana nentloko migraine njengoko Maxalt, Zomig almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, frovatriptan, zolmitriptan, Imitrex, kunye nabanye.
naluphi na uhlobo lwe-antidepressant
i-erectile dysfunctiondrugs- Levitra, Viagra avanafil, Cialis, sildenafil, tadalafil, nabanye;
tryptophan (eyaziwa ngokuba nguL-tryptophan);
ukukhwehlela okanye iziyobisi ezibandayo eziqukethe i-dextromethorphan; okanye
amayeza ukunyanga ukugula ngengqondo, ukukhathazeka okanye ukukhathazeka ngengxaki.
Uluhlu olungasentla aluphelelanga. Amanye amayeza angachaphazela i-lorcaserin, kwaye akukho konke ukusebenzisana okunokwenzeka oku kuluhlu kule khowudi yeyeza.
Iingxelo ze-BBC kwi-Safety and Efficiency ye-Lorcaserin HCL (i-CAS 616202-92-7)
Kukho iingxelo eziliqela ze-BBC kwiLorcaserin ngokubhekiselele kokungasebenzi kuphela kodwa ukhuseleko lweyeza. Ngokutsho BBC, uphononongo olwenziwe kutshanje, epapashwe kwi-New England Journal of Medicine, ibonisa abantu abasebenzisa lorcaserin avala iphango ipilisi ezilahlekileyo umlinganiselo ngeenxa 8.8lb (4kg) kwisithuba irekhodi njengokuba nje emithathu enesiqingatha. Iziphumo zolu pho nonongo lubonisa ukuba i-lorcaserin akungabazeki ukuba enye yezona zipilisi zokulahlekelwa kwesisindo.
Ingxelo ithi kwakhona isicatshulwa kuba isebenza ngokunciphisa ukutya, musa ukubeka abasebenzisi engozini ephezulu yeemeko zentliziyo. Ukufundwa okushicilelweyo kulandele i-12,000 obese okanye izigulane ezigqithiseleyo kwi-USA kwiinyanga ezili-40.
Emva kweminyaka emithathu nesiqingatha, abantu abadala bathatha i-lorcaserin babenokuphindwa kathathu kunokuba bangazange banciphise amahlanu ukuya kwishumi ekhulwini lomzimba wabo kunabo abafumana indawo ye-placebo, ngokomnye wabaphandi abaphambili be-Study, uDkt Erin Bohula.
Iimvavanyo eziqhutywe kwi-valve yenhliziyo azibonisanga naziphi na iintlukwano ezibalulekileyo xa kuthelekiswa neentliziyo zeplavinti zabathabatha indawo ye-placebo. Xa ucinga ukuba oku bekuyona nkxalabo ebalulekileyo xa kuziwa kukhuseleko lwezinye iipilisi ezincinci, i-lorcaserin inokuthi ibe yipilisi yokulahlekelwa kwesisindo esihle.
Abadala bathatha iyeza babekwasemngciphekweni ophantsi wohlobo lwe-2 yeswekile. I pilisi ixabisa nge-£ 155-225 (i-$ 220-290) ngenyanga nganye ngenyanga e-US. I-Lorcaserin inikeza enye indlela engcono kwiindlela zokunciphisa ubunzima bokunciphisa umzimba njengobungqina bentsebenzo yebastric phakathi kwabanye.
Enye ingxelo ye-BBC ibonisa uphando ngabaphandi kwi-University of Aberdeen yaseRotttt Institute eyenze uphando malunga nesidlo. Iingcali zenzululwazi zathi ukuphanda kwabo ngokutya kwababakhokela kwinxalenye ethile yengqondo.
Baqaphela ukuba ngokuchaphazela loo maseli athile kunye namachiza ababenako ukunciphisa ukutya. Ekubeni i-lorcaserin isebenza ngolu hlobo, iziphumo zolu cwaningo aluvuli kuphela iingcango zamachiza amasha njengeLorcaserin kodwa zomeleza oko iingcali zikholelwa malunga ne-lorcaserin-ukhuseleko kunye nokusebenza kwayo.